ငှကွေေးအရလှတျလပျခွငျး (Financial Freedom) | မာသငျ
ငှကွေေးအရလှတျလပျခွငျး (Financial Freedom)
မလုပျခငျြတဲ့ အလုပျတဈခုကို ငှကွေေးအရ ဆကျလုပျနရေတယျဆိုရငျ ….
မသှားခငျြတဲ့အလုပျတဈခု ကို ငှကွေေးအရ ဆကျသှားနရေတယျဆိုရငျ…
ငှကွေေးအရ ..မလှတျလပျသေးသ၍၊ လှတျလပျသူလို့မဆိုနိုငျဘူး။
ဘဝမှာ အသကျ ၆၀ နရေမယျဆိုခဲ့ရငျ ၊ ရကျပေါငျး (၂၁,၉၀၀) ရှိတယျ။
၁ ရကျမဟုတျ၊ ၁ ရကျမှာ ….
အခှငျ့အရေးပေါငျး ၂၁,၉၀၀ ကွိမျရှိတယျ။
ဘယျနဖွေ့ဈလာမလဲ ဆိုတာကတော့ … ကိုယျ့ဆုံးဖွတျခကျြပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဘ၀ နဝေငျခြိနျမတိုငျခငျ၊ အခှငျ့အရေးတှေ လကျလှတျမဆုံးရှုံးခငျ … “ ဒီနေ့..ငါလှတျလပျပွီဟေ့” လို့ကွငွောသှားနိုငျဖို့..
ဒီနေ့… ပေးဆပျ …. နိုငျရမယျ။
ငွေကြေးအရလွတ်လပ်ခြင်း (Financial Freedom)
မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ငွေကြေးအရ ဆက်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင် ….
မသွားချင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု ကို ငွေကြေးအရ ဆက်သွားနေရတယ်ဆိုရင်…
ငွေကြေးအရ မလွတ်လပ်ခြင်းလို့ ခေါ်တယ်။
ငွေကြေးအရ ..မလွတ်လပ်သေးသ၍၊ လွတ်လပ်သူလို့ မဆိုနိုင်ဘူး။
ဘ၀မှာ အသက် ၆၀ နေရမယ်ဆိုခဲ့ရင် ၊ ရက်ပေါင်း (၂၁,၉၀၀) ရှိတယ်။
၁ ရက်မဟုတ်၊ ၁ ရက်မှာ ….
ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ကို ကြေငြာနိုင်ဖို့ …
အခွင့်အရေးပေါင်း ၂၁,၉၀၀ ကြိမ်ရှိတယ်။
ဘယ်နေ့ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကတော့ … ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လွတ်လပ်ရေးနေ့ … ကိုယ့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး…
ဘ၀ နေ၀င်ချိန်မတိုင်ခင်၊ အခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်မဆုံးရှုံးခင် … “ ဒီနေ့ ..ငါလွတ်လပ်ပြီဟေ့” လို့ ကြေငြာသွားနိုင်ဖို့ ..
ဒီနေ့ … ပေးဆပ် …. နိုင်ရမယ်။